टोखाको भूतखेलमा मिनी फनपार्क सन्चालनमा
काठमाडौं, जेठ ३२ । टोखाको भूतखेलमा विभिन्न सुविधासहितको टोखा केब मिनी फनपार्क सन्चालनमा आएको छ । मंगलबार उद्घाटन गरिएको उक्त पार्कमा स्वीमिङ पुल, स्लाइडिंग वेभ, बेबी पोखरीका साथै टोखाको प्राचीन नगरीको संस्कृति झल्किने नेवारी रेस्टुरेन्टसमेत सन्चालन गरिएको छ ।
महिन्द्रा ‘पाओरोल जेनेरेटर’को आधिकारिक वितरकमा अग्नि ग्रुप
काठमाडौं, जेठ ३२ । महिन्द्रा ग्रुपअन्तर्गतको महिन्द्रा ‘पाओरोल डिजेल जेनेरेटर’को आधिकारिक वितरकमा अग्नि ग्रुपपलाई नियुक्त गरिएको छ । मंगलबार राजधानीमा महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राका दक्षिण एसियाका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा हेड अफ इन्टरनेसनल अप्रेसन्स सञ्जय जादवले नेपालमा उक्त जेनेरेटरका लागि अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी अग्नि इनर्जीसँग साझेदारी गरेको जानकारी दिए ।
‘शक्ति व्हील’ अब ‘रिन शक्ति’
काठमाडौं, जेठ ३२ । नेपालमा लोकप्रिय डिटरजेन्ट ब्रान्ड ‘शक्ति व्हील’ अब ‘रिन शक्ति’ भएको छ । यसमा भएको ब्राइट क्लीन प्रविधिले विगतका केहि वर्षहरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड, रिन शक्ति उपभोक्ताहरुका लागि ‘नयाँ जस्तो चमक’को पर्यायवाची शब्द नै भएको कम्पनीको दाबी छ ।
सुनको भाउ उकालो लाग्दै
काठमाडौं, जेठ ३२ । मंगलबार पनि सुनको मूल्य उकालो लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पच्छ्याउँदै यसदिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँले उकालो लागेर ५६ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च कारोबार, झन्डै सवा दुई अर्बको शेयर किनबेच
काठमाडौं, जेठ ३२ । मंगलबार पनि शेयर बजार सकारात्मक रह्यो । नेप्से साढे ४ अंक बराबरलेमात्र उकालो लागे पनि कारोबार हालसम्मकै उच्च रह्यो ।
सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे विकास समितिको चासो, तीव्र बनाउन निर्देशन (भिडियो)
काठमाडौं, जेठ ३२ । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारकार्यमा भइरहेको ढिला–सुस्तीले विभिन्नखाले समस्याहरु निम्तिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चक्रपथभित्रका सबै सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ ।
पूर्वराजपरिवारको दरबार रत्न मन्दिर अब सर्वसाधारणका लागि खुला
पोखरा, जेठ ३२ । फेवाताल किनारमा रहेको पूर्वराजपरिवारको दरबार रत्न मन्दिर असारको दोस्रो सातादेखि पर्यटकका लागि खुला गरिने भएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गत वैशाख ८ गते रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ पर्यटकलाई प्रवेश गराउन अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको थियो ।
कर्मचारी सञ्चयकोष (नवौं संशोधन) विधेयक समितिबाट पारित, के छ विधेयकमा ?
काठमाडौं, जेठ ३२ । व्यवस्थापिका–संसद, अर्थ समितिले कर्मचारी सञ्चयकोष नवौं सशोधन विधेयक, २०७१ लाई मंगलबार पारित गरेको छ । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिले सामान्य संशोधनपछि पारित गरेको हो ।
भक्तपुरका ठूला तीन सडकको विस्तार सुरु
भक्तपुर, जेठ ३२ । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जिल्लाका तीन ठूला सडकको विस्तार थालनी गरेको छ । कौशल्टार–बालकोट–बिरुवा सडक, विष्णुकुन्ड–सिद्धिकालीचोक–पुरानोबाटो–थिमी सडक र बाखाहा बजारबाट हुलाक रोड हुँदै नगरपालिका कार्यालय– मिलरोड–मनोहरा खोलासम्मको सडक विस्तार सुरु गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित राजश्व उठ्छ : डा. अधिकारी
काठमाडौं, जेठ ३१ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भने अधिकांशले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
शेयर बजारमा दैनिक उचाइको नयाँ रेकर्ड, नेप्से पुग्यो १६ सय ९ को उचाइमा
काठमाडौं, जेठ ३१ । सोमबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार हुँदै उचाइको नयाँ रेकर्ड रहनेक्रम जारी रह्यो । यसदिन पनि बजार परिसूचक नेप्से ११ अंकले उकालो लागेर १६ सय ९ कायम भएर थामियो ।